Islam Virus: June 2012
3 Stages of Jihad ( Step by Step )
We will say " Myanmar is in Stage-2 Jihad "
မွတ်ဆလင်တွေ နိုင်ငံတိုင်းမှာ တစ်ပုံစံတည်းသုံးနေတဲ့ နည်းဗျူဟာ က မိုဟာမက် AD 600 ကျော် မှာ ကတည်း က သုံးခဲ့တဲ့ Taqiyya ( Deceit) ပါပဲ။
မွတ်ဆလင် ဂျီဟတ် က step by step ပုံစံနဲ့ သွားနေတာပါ။ အားလုံးလည်း သိကြမှာ ပါ။
1. Infiltrate, 2. Overwhelm, 3. Devour
အင်အား မကောင်းသေးခင်မှာ Taqiyya ( Deceit) အင်အားကောင်းရင် ဂျီဟတ်
Islam is the religion of peace အစ္စလမ် ဟာငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘာသာလို့ မွတ်ဆလင်တွေ ပြောကြပါတယ်။
ဟုတ်ပြီ။ ဒီလောက်တောင် " ဘာသာခြားတွေကို လည်လှီးသတ်ဖို့ လှုံ့ဆော်ထားတဲ့ ကျမ်းချက် တစ်ရာကျော်ပါတဲ့ ကုရ်အာန်ကျမ်းစာ ကို မင်းတို့ က ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘာသာ လို့ ဘာသက်သေနဲ့ ပြောနေတာလဲ " လို့ မေးရင်
မွတ်ဆလင်တွေ ဟာ ကုရ်အာန်ကျမ်းစာထဲ က ရှားရှားပါးပါး ငြိ်မ်းချမ်းတဲ့ Verses လေးတွေကို ထုတ်ဖတ်ပြကြပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောဆောင်တဲ့ ၊ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ကုရ်အာန်စာသားလေးတွေ ပါပဲ။
ဒါပေမယ့် အဲဒီ ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောဆောင်တဲ့ ၊ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ကုရ်အာန်စာသားလေးတွေဟာ ဘာသာခြား Kafir ( Non-Muslims) တွေကို ဗြောင်လိမ်ဖို့Taqiyya အတွက် အစ္စလမ် ဟာ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ဘာသာဖြစ်ကြောင်း လှည့်စားဖို့ အတွက် အသုံးပြုဖို့ သီးသန့် တီထွင်ထားတဲ့ မက်ကာ Verse ( Meccan Surahs) တွေ ဖြစ်နေတာကို တွေ့ ရပါတယ်။
ကုရ်အာန်ကျမ်းမှာ အဓိက အားဖြင့် မက်ကာ Verses နဲ့ မက်ဒီနာ Verses တွေ ရယ်ဆိုပြီး နှစ်မျိုး ရှိပါတယ်။
Meccan Surahs ဆို တာ မိုဟာမက် မက်ကာမြို့ မှာ မွတ်ဆလင်အင်အား မတောင့်တင်းခင်၊ မွတ်ဆလင် လူအင်အား၊ လက်နက်အင်အားစုနေတုန်း စရိုက်တစ်မျိုးနဲ့ ပြောခဲ့တဲ့ စကားတွေကို ဘေးကကြားတဲ့ မွတ်ဆလင်တွေ က ကုရ်အာန်မှာ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ( ဥပမားthere is no compulsion in Religion, )
Medinan Sura ဆိုတာ ကတော့ မိုဟာမက် မက်ဒီနာ မြို့ မှာ မွတ်ဆလင်အင်အားတောင့်တင်းပြီး လက်နက်ပြည့်စုံတဲ့ အခါ နောက်စရိုက် တစ်မျိုးနဲ့(မျက်နှာဖုံးကွာကျ) ပြောခဲ့တဲ့ စကားတွေကို ဘေးကကြားတဲ့ မွတ်ဆလင်တွေ က ကုရ်အာန်မှာ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
မိုဟာမက်က ( အာရေဗျ စာကို ပဲ) စာမတတ်ပါဘူး။ စာကို ဖတ်လည်း မဖတ်တတ်၊ ရေးလည်း မရေးတတ်ခဲ့ပါဘူး။
မိုဟာမက် ဟာ စာမတတ်ပေမဲ့ မယား ၁၁ယောက်ရှိတာ မို့ မယားတွေနဲ့ ချိုမိုင်မိုင် ကစားနေရတဲ့ အတွက် စာသင်ဖို့ လည်း အချိန်မရှိပါဘူး။
မိုဟာမက်ဟာ စာတတ်ချင်စိတ်၊ စာသင်ယူချင်စိတ်လည်း ရှိခဲ့ဟန်မတူပါဘူး။ မိုဟာမက်ဟာ တစ်နေ့ တစ်နေ့မယားတွေနဲ့ ပဲ
သမိုင်းကြောင်းနောက်ခံ အရ ကြည့်မယ်ဆိုရင် မက်ကာ Verses ( Meccan Sura ) တွေ ဟာ မိုဟာမက် အစောပိုင်းကာလ မွတ်ဆလင် အင်အားနည်းနေစဉ် လူသူလက်နက်အင်အား နည်းနေချိန်မှာ ဘာသာခြားတွေကို လှည့်စား ဖို့ ( ပျားရည်နဲ့ ဝမ်းချဖို့ ) သုံးခဲ့တဲ့ Verses တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ( အစွန်းမရောက်သေးဘူး။ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ အစ္စလမ် ဖြစ်နေသေးတယ်။ အချိန်မတန်သေးလို့ )
Meccan Surahs are characterized by peace and the absence of violence; that is when Muhammad was weak and persecuted by the leadership of the Quraish tribe.
မက်ဒီနာ Verses ( Medinan Sura) တွေ က တော မိုဟာမက် က မွတ်ဆလင် လူသူလက်နက်အင်အား တောင့်တင်းပြီး ( မှည့်သွားပြီ ၊ အစွန်းရောက်ဖို့ အချိန်တန်သွားပြီ) မက်ကာမြို့ က ဂျူးတွေ၊ ခရစ်ယာန်တွေကို သတ်ဖို့ အလ္လာဟ်က ညွှန်ကြားထားတဲ့ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ Medinan Verses ( Medinan Sura) တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ Medinan Verses တွေ ဟာ အလ္လာဟ် ရဲ့ latest updates နောက်ဆုံး အမိန့် တော်ဖြစ်တဲ့ အတွက် အစောပိုင်းက မွတ်ဆလင်အင်အား မကောင်းသေးခင်ပြောခဲ့တဲ့ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ မက်ကာ Verse တွေကို ကျော်ဖြတ်ပြီး အတည်ဖြစ်သွားပါတယ်
( ဟုတ်ကဲ့၊ အဲဒီလို လုပ်လို့ ရပါလား? ရပါတယ် အဲဒါ အလ္လာဟ်ရဲ့ အမိန့် ပါ။ ပြန်မပြောနဲ့ ၊ ပြန်မမေးနဲ့ ၊ ဆင်ခြေမတက်နဲ့ ။ အလ္လာဟ် က သူကြိုက်တဲ့ အချိန် မှာ ကြိုက်သလို ကုရ်အာန်ကျမ်းကို ပိုမိုကောင်းမွန်သင့်လျှော်တဲ့ စာသားနဲ့မိုဟာမက် ထင်သလို အစားထိုးလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်၊ )
Allah removes what He wills..13:39
Allah substitutes one revelation with another; Allah has the mother of the Book...16:101
“When Mohammed migrated to Medina, he became strong, and eventually organized an Islamic state. It was during this period (622-632,) that he received surahs that called for Jihad against the unbelievers in Mecca, as well as the Jews and Christians in Arabia. These are called Medinan Suras.
These suras appeared when the Muslims were in larger numbers, rather than being an oppressed minority as in Mecca.
မက်ကာ Verse တွေဟာ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ သဘောဆောင်ပါတယ်။ ဥပမာ.. there is no compulsion in Religion
တစ်ကမ္ဘာလုံး ကမွတ်ဆလင်တွေ ဟာ မိုဟာမက် မက်ကာမြို့ ကလူတွေကို အနိုင်မရသေးခင် လှည့်စားခဲ့သလို
ဘာသာခြားနိုင်ငံတိုင်းမှာ မွတ်ဆလင်တွေဟာ အစ္စလမ် သည် ငြိမ်းချမ်းသော ဘာသာဖြစ်ကြောင်း လိမ်ညာဖို့ အတွက် မက်ကာ Verse တွေကို သုံးကြပါတယ်
ဒါပေမယ့် ဘာသာခြား Non-Muslims တွေ မသိကြတဲ့ အချက် က အဲဒီ ကုရ်အာန်ကျမ်းစာ က ငြိမ်းချမ်းတဲ့မက်ကာ Verse တွေ အားလုံး ( အားလုံး) ကို အကြမ်းဖက် သတ်ဖြတ်ခိုင်းတဲ့ မက်ဒီနာ ကျမ်းချက်တွေ အားလုံး က ထပ်ဆင့် ကျော်ဖြတ် အတည်ပြုလိုက်တယ်ဆိုတာ ပါပဲ။
သဘော က ငြိမ်းချမ်းတဲ့ မက်ကာကျမ်းချက်တွေ အားလုံး ဟာ အလ္လာဟ်ရဲ့ ထပ်ဆင့် အမိန့် တော် အရ ပိုမိုကောင်းမွန်သင့်တော်ပြည့်စုံတဲ့ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်လူသတ်ခိုင်းတဲ့ မက်ဒီနာကျမ်းချက်တွေ နဲ့လဲလှယ် လိုက်ပြီဆိုတာပါပဲ
There are 245 verses in the Quran that could be considered "peaceful verses" about non-Muslims.
Every single one of those peaceful verses have been abrogated by later, Violent verses about non-Muslims. Not one peaceful verse about non-Muslims is left.
ဟုတ်ပါတယ်။ ကုရ်အာန်ကျမ်းတစ်အုပ် ထဲ က စကား ၂မျိုးပြောထားခဲ့တာပါ။ အလ္လာဟ်ကိုယ်တိုင် စကား ၂ မျိုးပြောထားခဲ့ တာပါ။
တစ်မျိုး က လိုအပ်ရင် ဘာသာခြားတွေကို ဖိန့် ဖို့for show Verse ဖြစ်ပြီး ကျန်တစ်မျိုး က မှ အတည်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အစ္စလမ် ဟာ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘာသာဖြစ်ကြောင်း မွတ်ဆလင်တွေ ပြလေ့ပြထ ရှိတဲ့ ကုရ်အာန်ကျမ်းချက်တွေဟာ လိုအပ်ရင် ဘာသာခြားတွေကို ဖိန့် ဖို့for show Verse အစားထိုးခံခဲ့ပြီးသားဖြစ်တဲ့ မက်ကာ Verse တွေဖြစ်ပြီး ဘာသာခြားတွေ ကို လက်တစ်လုံးခြား ..နားလှည့်ပါးရိုက်လုပ်နေတာပါ။
အဲဒီ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ မက်ကာ Verse တွေ ဟာ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ Medinan Sura တွေနဲ့ အစားထိုးပြီးဖြစ်တဲ့ အတွက် ငြိမ်းချမ်းတဲ့ မက်ကာ Verse တွေ ဟာ ကုရ်အာန်သင်ကြားချက်မှာ အကျူံးမ၀င်တော့ပါဘူး။ ဘာသာခြားတွေကို လိမ်လည်လှည့်ဖျားဖို့ တစ်ခု အတွက်သာ သုံးဖ်ို့ထားတဲ့ Verse တွေဖြစ်ပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့။ တစ်ခါမှ မကြားဖူးပါဘူး။ ဘယ်ဘာသာမှ၊ ဘယ်ဘုရားမှ လည်း စကားကို လိမ်လည်ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲပြီး နှစ်မျိုး ပြောခဲ့တာ ဘယ်ဘာသာမှာမှ လည်း မရှိပါဘူး။
ဟုတ်ကဲ့။ အဲဒါ အစ္စလမ် ပါ။ မွတ်ဆလင် ဆိုတာ အဲဒါတွေကို မွေးကတည်းက ခေါင်းထဲရိုက်သွင်းခံထားရတဲ့ သူတွေပါ။
ကျနော်တို့ ဟာ ဒီလို မွတ်ဆလင်တွေ နဲ့ deal လုပ်နေရတာပါ။
ကိုယ့်အသက်ကိုတောင် မနှမြောပဲ လူ့ ကိုယ် မှာ ဗုံးတွေကပ် ဗုံးဖေါက်ခွဲပြီး သူတစ်ပါး အသက်တွေကို သတ်ရင် ကောင်းကင်ဘုံရောက်မယ်လို့ခေါင်းထဲရိုက်သွင်းခံထားရတဲ့ မွတ်ဆလင်တွေနဲ့ deal လုပ်ရတဲ့ အခါ လူပြိန်းအတွေးအခေါ် လူပြိန်းစဉ်းစားပုံ စဉ်းစားနည်း တွေနဲ့ ချဉ်းကပ်လို့ မရပါဘူး။
မွတ်ဆလင် တို့ ရဲ့ ဦးနှောက်၊ နှလုံးသည်းခြေ ( ကုရ်အာန်) ထဲကို ထိုးဖေါက် ကြည့်နိုင်မှ တော်ကာကျမှပါ။
ဒါကြောင့် မည်သည့်နိုင်ငံ မည်သည့်ဒေသ မှ မွတ်ဆလင်ဖြစ်ပါစေ ကုရ်အာန်ကျမ်းစာ အရ မွတ်ဆလင် လူအင်အား အခြေအနေကို သုံးသပ်လိုက်ရင် ဒီမွတ်ဆလင်တွေ ဟာ ဘယ်အဆင့် ရောက်နေပြီလဲ။
စိမ်းနေသေးတာလား ။ မှည့်ဖို့ အရှိန်ယူနေတာလား ။ မှည့်ခါနီးနေပြီလားဆို တာ သိနိုင်ပါတယ်။
ကလေးမွေးနှုန်း လူဖေါက်တာ ဘယ် level ရောက်နေပြီလဲ။ ဗလီ ဘယ်နှစ်လုံးဆောက်ပြီးပြီလဲ။
မီဒီယာ ၊ အစိုးရ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ မှာ မွတ်ဆလင်တွေ ဘယ်လောက် အတိုင်းအတာ အထိ ထိုးဖေါက်ပြီးပြီလဲ။
နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ လူဦးရေ ဘယ် level အထိ ရောက်ပြီလဲ Islamize လုပ်နိုင်ပြီလား၊ အချိန်စောင့်ရအုန်းမလား။ ဒါတွေ အားလုံးကို ခြုံငုံသုံးသပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မည့်သို့ ပင်မွတ်ဆလင်များ လိမ်လည် လှည့်ဖျား ( Taqiyya ) စေကာမူ ကုရ်အာန်ကျမ်းနဲ့အစ္စလမ် နည်းဗျူဟာအရ မည်သည့်နိုင်ငံ ၊ မည်သည့်ဒေသ က မွတ်ဆလင်ဖြစ်စေကာမူ သူတို့ ဧ။်အခြေအနေကို မှန်ကန်စွာ နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။
ဤကမ္ဘာကို စောင့်ရှောက်လျှက်ရှိသော လောကပါလတရား ၊ ဓမ္မတရား ၊ ဗြဟ္မာဏတရား ၊ သမ္မာတရား တို့ အားဖြင့် မကောင်းဆိုးဝါးအလ္လာဟ်ဧ။် အစ္စလမ်မိစ္ဆာအယူဝါဒ အမြန်ကျဆုံးရမည် ။
100% Islam World !! Would there be peace on Earth?
၁၀၀% မွတ်ဆလင်ကမ္ဘာ ဖြစ်သွားတဲ့ အခါ ငြိမ်းချမ်းမှာလား။?
အဓိက အချက် က အစ္စလမ်ဘာသာ ဟာ မကောင်းဆိုးဝါးအလ္လာဟ် က ဖန်တီးထားတဲ့ ဘာသာဖြစ်ပါတယ်။
အစ္စလမ်ဘာသာ ဟာ ကမ္ဘာပေါ်က လူသားမျိုးနွယ်ကို သေကြေ ပျက်စီးအောင် အချင်းချင်း Groups, Tribes လေးတွေ ခွဲပြီး မသေမချင်းသတ်အောင် မကောင်းဆိုးဝါးအလ္လာဟ် က ဖန်တီးထားတဲ့ ဘာသာဖြစ်ပါတယ်။
မကောင်းဆိုးဝါးအလ္လာဟ် ဖန်တီးထားတဲ့ အစ္စလမ်ဘာသာ ဟာ " အစကတည်းကယဉ်သကို " ဆိုသလို အစကတည်း က လူသားမျိုးနွယ်ကို မွတ်ဆလင်နဲ့မွတ်ဆလင်မဟုတ်တဲ့ သူတွေ ဆိုပြီး နှစ်ပိုင်းပိုင်းပြီး လူသားအချင်းချင်း မသေသေ အောင် သတ်ခိုင်းတယ်။
ကမ္ဘာ ပေါ် က လူသားအားလုံး မကောင်းဆိုးဝါးအလ္လာဟ် ကို ကိုးကွယ်ရမယ်ပေါ့။ တစ်ကမ္ဘာလုံး မွတ်ဆလင်တွေ ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်။ ဟုတ်ပါပြီ။ ဒါပေမယ့်..
ပြဿနာ က ...ကမ္ဘာလုံး မွတ်ဆလင်ဖြစ်သွားရင် သတ်တာ ဖြတ်တာ တွေ ရပ်ပြီး အားလုံးအေးချမ်းသွားမှာ လား။
၁၀၀% မွတ်ဆလင် အစ္စလမ်၊ House of Islam ဖြစ်သွားပြီးရင်ကော မွတ်ဆလင်တွေ အေးအေးချမ်းချမ်း နေကြမှာလား။
၁။ တစ်ကမ္ဘာလုံး အစ္စလမ် ဖြစ်အောင် မွတ်ဆလင်တွေ အရင်ကြိုးစား၊ ပြီးသွားရင်ကော
၂။ ပြီးသွားရင် မွတ်ဆလင် အချင်းချင်း ရှင်းစရာရှိတာ ....ရှင်းရအုန်းမယ်...
မွတ်ဆလင်ဖြစ်တိုင်း ပြီးတာ မဟုတ်ဘူး။
မိုဟာမက် က သေချာ ပြောခဲ့တာ..... မှန်ကန်တဲ့မွတ်ဆလင် ဂိုဏ်း Sect ၁ ခုပဲ အလ္လာဟ်ဘုံရောက်ပြီး အပျိုစင် ၇၂ယောက် လူပျိုပေါက် ၂၈ယောက်နဲ့ ၂၄နာရီ လိင်ဆက်ဆံရမှာ
ကျန်တဲ့ ၉၉% မွတ်ဆလင် အားလုံး ( အားလုံး)မှားယွင်းနေတာမို့ လို့ငရဲကျမှာ
Messenger of Allah ( peace and blessings of Allah be upon him) stood up among us and said; ” Those who came before you of the people of book split into seventy-two sects, and this ummah will split into seventy-theree secs. Seventy-two Islamic sections will go to hell and only one Islamic section will go to Paradise, and that is the ??????? Islamic section. [Saheeh Muslim, no.976]
မှန်ကန်တဲ့ sect ဂိုဏ်းဖြစ်မှသာ အလ္လာဟ် ဘုံရောက်ပြီး အပျိုစင် ၇၂ယောက် လူပျိုပေါက် ၂၈ယောက်နဲ့ ၂၄နာရီ လိင်ဆက်ဆံရမှာ..
ဒီတော့ မွတ်ဆလင်အစ္စလမ် sects တွေ ဘယ်နှစ်မျိုးလောက် ကွဲနေလဲကြည့်ရအောင် ....
အစ္စလမ်ဂိုဏ်းခွဲတွေ sect တွေ ဟာ ရာနဲ့ ချီပြီး အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာ ကွဲနေပါတယ်
အဓိကအစ္စလမ်ဂိုဏ်းခွဲတွေ တောင် တော်တော်များပါတယ်။ အောက်မှာ ကြည့်ပါ။
Dawoodi Bohra Islam
Sulaimani Bohra Islam
Hebtiahs Bohra Islam
အဓိကအစ္စလမ်ဂိုဏ်းခွဲတွေ တောင် တော်တော်များပါတယ်။ branch အသေးလေးတွေအကုန်လုံးဆို ရာနဲ့ ချီပြီး Islam Sects တွေကွဲနေပါတယ်။
အစ္စလမ် sect တစ်ခုတည်း က ကြီးမားကျယ်ပြန့် လာတာ မဟုတ်ပဲ မတူညီတဲ့ အစ္စလမ် sects အမျိုးမျိုး က ကမ္ဘာ့နယ်မြေ နိုင်ငံ အသီးသီးမှာ အုပ်စိုးနေကြတာ။
ဒီ အစ္စလမ် sects တွေ ဟာလည်း ကိုယ် အုပ်စိုးတဲ့ နေရာတွေ မှာ အင်အားကောင်းလာအောင် လုပ်နေကြတာချည်းပဲ။ တစ်ကမ္ဘာလုံး အစ္စလမ် ဖြစ်ပြီးရင် လာတော့မဲ့မွတ်ဆလင်စစ်ပွဲတွေ အတွက်။
အဲဒီ sects တွေထဲ ကမှာ မှန်ကန်တဲ့ sect ဂိုဏ်းတစ်ခုသာလျှင် အလ္လာဟ် ဘုံရောက်ပြီး အပျိုစင် ၇၂ယောက် လူပျိုပေါက် ၂၈ယောက်နဲ့ ၂၄နာရီ လိင်ဆက်ဆံရမှာ..
ကျန်တဲ့ ၉၉% မွတ်ဆလင် sects အားလုံး ( အားလုံး) ငရဲကျမှာ..
မွတ်ဆလင်တွေ ကို မိုဟာမက် ကြီးပေးခဲ့တဲ့ Puzzle ပါပဲ။ တကယ့်ကို Puzzle ပါပဲ။
Messenger of Allah ( peace and blessings of Allah be upon him) stood up among us and said; ” Those who came before you of the people of book split into seventy-two sects, and this ummah ( Islam ) will split into seventy-theree secs. Seventy-two Islamic sections will go to hell and only one Islamic section will go to Paradise, and that is the ??????? Islamic section. [Saheeh Muslim, no.976]
ရုတ်တရက်ကြည့်ရင် " အလ္လာဟ် က လွဲ ပြီး ဘယ်ဘုရားမှ မရှိ၊ မိုဟာမက် သည် အလ္လာဟ်ဧ။် တမန်တော်ဖြစ် သည် " ၀န်ခံတာနဲ့ မွတ်ဆလင်ဖြစ်ပြီလို့ ပြောပေမဲ့
တကယ့် လက်တွေ့ မှာ ....
အဲဒီ Sect တွေ တစ်ခုချင်းဆီမှာ အယူအဆပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာအဓိ က ကွဲလွဲချက်တွေရှိပါတယ်။ မွတ်ဆလင်တွေ ဟာ လိုအပ်ရင် ဗြောင်လိမ်တဲ့ Taqiyya ( Islamic Deceit ) ကို သူတို့ ဂိုဏ်းခွဲအချင်းချင်း သုံးကာ
သူတို့ မွတ်ဆလင် sects ကွဲအချင်းချင်းလည်း အယူအဆ အဓိ က ကွဲလွဲချက်တွေ မှာ ၅ပြားဖိုးတောင် မလျှော့ပါဘူး။
ဒီအတွက် သူတို့ မွတ်ဆလင် sect ကွဲအချင်းချင်းလည်း ဂျပိုးလိပ်ဖြစ်အောင် Taqiyya ( Islamic Deceit) တိုင်ပတ်ပြီး ဗြောင်လိမ်နေကြတဲ့ အတွက် သူတို့ မွတ်ဆလင် sect ကွဲအချင်းချင်း ကျတော့ စကားနဲ့ သိပ်မရှင်းကြတော့ဘူး။ အသေခံဗုံးခွဲပြီး ရှင်းကြတာများတယ်။
ဥပမာ ၊ ရှီးယိုက်မွတ်ဆလင်တွေဟာ မိုဟာမက်ရဲ့ မြေးတော် ဟူစိန်ကို အရမ်းချစ်တယ်။ ဆွန်နီမွတ်ဆလင်တွေ က ဟူစိန်ကို လည်လှီးသတ်ခေါင်းဖြတ်ပစ်လိုက်တယ်။ ရှင်းရော....
ကဲဘယ်လို ညှိမလဲ၊ ဘယ်လိုမှ ကို ညှိလို့ မရတော့ဘူးလေ။ ဒီတော့ သူသေကိုယ်သေ သတ်ရုံက လွဲလိ်ု့ မရှိတော့ဘူး။
ရှီးယိုက်မွတ်ဆလင်တွေ ကို ဆွန်နီမွတ်ဆလင်တွေ က သတ်ထားပုံ ( နမူနာ ပုံ)
ဒီတော့ တစ်ကမ္ဘာလုံး အစ္စလမ် ဖြစ်ပြီးရင် အဲဒီ ပြဿနာ ကို ရှင်းရအုန်းမယ်။
လောလောဆယ် မွတ်ဆလင်မဟုတ်သူ ..ရန်သူ Kafir ( ဟိန္ဒူ ၊ခရစ်ယာန် ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ ၊ ဂျူး တွေကို အရင်သတ်နေရလို့ ) ခဏထားထားတာ။
လောလောဆယ် မွတ်ဆလင်အချင်းချင်း ညီညွတ်ပြီး ဟိန္ဒူ ၊ခရစ်ယာန် ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ ၊ ဂျူး တွေကို သတ်ဖို့ က၊ ဟိန္ဒူ ၊ခရစ်ယာန် ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ နိုင်ငံတွေကို Islamize လုပ်ဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပဲလေ။ဒါကြောင့်ခဏအောင့်ထားတာ၊ ဒါတောင် မအောင့်နိုင်တဲ့ Sects တွေက မတူညီတဲ့ ဗလီတွေမှာ အသေခံဗုံးခွဲနေကြပြီ
နိုင်ဂျီးရီးယား တွင်ခရစ်ယာန်များကို မွတ်ဆလင်တွေ က အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့သတ်ထားပုံ
ဒါတောင် မအောင့်နိုင်တဲ့ Sects တွေက မတူညီတဲ့ ဗလီတွေမှာ အသေခံဗုံးခွဲနေကြပြီ ။
ဒီကြားထဲတော့ ကိုယ့်ရဲ့ မွတ်ဆလင် Sect ကို အင်အား ကောင်းသထက်ကောင်းအောင် မွေးကြတာပေါ့။ Taqiyya လေ။ မွတ်ဆလင်အချင်းချင်းလည်း ဒီ Tactics ပဲပြန်သုံးကြတာပဲ။
ဆွန်နီမွတ်ဆလင်တွေက လည်း အင်အား ကောင်းအောင်မွေးနေသလို၊ ရှီးယိုက်မွတ်ဆလင်တွေ ကလည်း လူများအောင် အစွန်းကုန် ကြိုးစားနေကြတာပေါ့။
ဒါကြောင့် အစ္စလမ်ဘာသာ ဟာ မကောင်းဆိုးဝါးအလ္လာဟ် က ကမ္ဘာပေါ်က လူသားမျိုးနွယ်ကို သေကြေအောင် အချင်းချင်း Groups, Tribes လေးတွေ ခွဲပြီး မသေမချင်းသတ်အောင် ဖန်ဆင်းထားတဲ့ မကောင်းဆိုးဝါး ဘာသာဖြစ်ပါတယ်။
အရင် ဆုံး လူသားမျိုးနွယ်ကို နှစ်ပိုင်းခွဲ ၊ လူသားမျိုးနွယ်ကို မွတ်ဆလင်နဲ့မွတ်ဆလင်မဟုတ်တဲ့ သူတွေ ဆိုပြီး သတ်ခိုင်း၊
ဟိန္ဒူ ကလေးငယ်လေးကို မွတ်ဆလင်များ အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့သတ်ထားပုံ
ဟိန္ဒူဘာသာဝင်များကို မွတ်ဆလင်တို့ အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့သတ်ထားပုံ
စစ်တကောင်းတောင်တန်းဒေသမှ ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးကျောင်းကို မွတ်ဆလင်တို့ မီးရှို့ဖျက်ဆီးထားပုံ
တစ်ကမ္ဘာလုံး မွတ်ဆလင် ဖြစ်ပြီးသွားမှမွတ်ဆလင်အချင်းချင်း မှန်ကန်တဲ့ Sect ဂိုဏ်း အတွက် မှားယွင်းတဲ့ မွတ်ဆလင်ဂိုဏ်းတွေကို ရှင်းသတ်ရအုန်းမယ် ။ Islamic Sectarian Cleansing to purify Islam လုပ်ကြရအုန်းမယ်။
အခု အစ္စလမ် sect တစ်ခုတည်း က ကြီးမားကျယ်ပြန့် လာတာ မဟုတ်ပဲ မတူညီတဲ့ အစ္စလမ် sects အမျိုးမျိုး က ကမ္ဘာ့နယ်မြေ နိုင်ငံ အသီးသီးမှာ အုပ်စိုးနေကြတာ။
နောက်ဆုံးမှာ မှန်ကန်တဲ့ မွတ်ဆလင် sect ဂိုဏ်းတစ်ခုသာလျှင် ကျန်ရမယ်။ နောက်ဆုံးမှာ မှန်ကန်တဲ့ မွတ်ဆလင် sect ဂိုဏ်းတစ်ခုသာလျှင် အလ္လာဟ်ဘုံရောက်ပြီး အပျိုစင် ၇၂ယောက် လူပျိုပေါက် ၂၈ယောက်နဲ့ ၂၄နာရီ လိင်ဆက်ဆံရမယ်။ ကျန်တဲ့ ၉၉% မွတ်ဆလင် sects အားလုံး ( အားလုံး) ငရဲကျမှာ..
ဘယ်လောက် Psycho ဆန်ပြီး ရူးသွပ်နေတဲ့ အစ္စလမ်ဘာသာလဲ။
အရင်ဆုံးလူသားမျိုးနွယ်ကို မွတ်ဆလင်နဲ့မွတ်ဆလင်မဟုတ်တဲ့ သူတွေ ဆိုပြီး ၂မျိုးခွဲ....မွတ်ဆလင်မဟုတ်တဲ့သူတွေကို အရင်အကုန်သတ် ၊
မွတ်ဆလင်မဟုတ်တဲ့သူတွေ အကုန်သေသွား ( လက်နက်ချ အညံ့ခံသွား) လို့ မွတ်ဆလင်တွေချည်းပဲဖြစ်ရင်
မှန်ကန်တဲ့ မွတ်ဆလင် sect ဂိုဏ်းတစ်ခု အတွက် သတ်ကြ၊ မှားယွင်းနေတဲ့ မွတ်ဆလင်ဂိုဏ်း sects တွေကိ်ု အကုန်သတ်ကြ။
မှန်ကန်တဲ့ မွတ်ဆလင် sect ဂိုဏ်းဆိုတာ... ဘာမှန်းလဲ မိုဟာမက် က ...သေချာ မပြောခဲ့ Puzzle.
ဘယ်ဆွန်နီ မွတ်ဆလင် မှတော့ ငါရဲ့ ဆွန်နီများမှားနေပြီး Ahmadiyya ကများမှန်နေမလားဆို ပြီး တွေးတာ မဟုတ်ဘူး...
ဒီတော့ ကိုယ့်စိတ်ထင်နဲ့ ကိုယ်ကလွဲလို့ ကိုယ့် မွတ်ဆလင်ဂိုဏ်းမဟုတ်တဲ့ တခြားsects က မွတ်ဆလင်ကောင်တွေ ကို အကုန်သတ်....
သိုင်းကားထဲက လို ၂နဲ့ စားပြီး အကုန်သတ်၊ နောက်ဆုံးကျန်တဲ့ တစ်ယောက်သာလျှင် ရတနာတွေ ရမယ်ဆိုတာမျိုး။
သန်း ၇၀၀၀ ထောင်ကို ၂ နဲ့ စားပြီး သန်း ၃၅၀၀ ဆီခွဲသတ်၊
သန်း၃၅၀၀ ကျန်ရင် သန်း ၁၇၅၀ စီခွဲပြီး သတ်၊ နောက်ဆုံး လူတစ်ယောက် ကျန်တဲ့ အထိသတ်ခိုင်းတဲ့ ဆိုက်ဒ်ကို psycho islam ဖြစ်ပါတယ်
လက်တွေ့ လည်း မွတ်ဆလင်တွေ sects ကွဲတွေ သတ်နေကြတာ တစ်နေ့ တစ်နေ့မြင်မကောင်းပါဘူး။
ဒါကြောင့် မွတ်ဆလင်တွေရဲ့ ခေါင်းထဲကို မွေးကတည်း က ဗလီဆရာတွေက အာဏာရှင်စနစ်နဲ့ ရိုက်သွင်းထားတဲ့ မကောင်းဆိုးဝါး အစ္စလမ် ၊
မွတ်ဆလင်တွေရဲ့ ဦးနှောက်ထဲ အထိ ကူးစက်ပျံ့နှံ့ရောက် ရှိနေတဲ့ အစ္စလမ် ဗိုင်းရပ်ကြောင့် မွတ်ဆလင်တွေဟာ လူသားစစ်စစ် ဘ၀ ကနေ Zombies တွေ ဖြစ်ကုန်တာပါပဲ။
မွတ်ဆလင်တွေ ....မိုဟာမက် ပဟေဠိ ပေးသွားတဲ့ 73 မွတ်ဆလင်ဂိုဏ်းထဲ က ဘယ်ဂိုဏ်း က အမှန်လဲသင်တို့သိကြရဲ့လား။
၉၉% ငရဲကျမဲ့ ၇၂ sects ထဲမှာ သင်တို့ ပါနေပြီလား။ သေချာစဉ်းစားကြပါ။
လူမှာ မွေးရာပါ ဦးနှောက် ရှိပါတယ်။ မကောင်းဆိုးဝါး က မွတ်ဆလင်တွေ ခေါင်းထဲကို ရိုက်သွင်းထားတဲ့ Idea ကို မိမိ မွေးရာ ပါ လူသားစိတ်နဲ့ ချေမှုန်းပြီး လူသားစစ်စစ် ဘ၀ ကို ပြန်ရအောင် ကြိုးစား ကြပါ။
လူကို လူလို့ မမြင်ခိုင်းပဲ ရန်သူလို့ မြင်ခုိင်းတဲ့ Qu'ran အညစ်အကြေးတွေကို သင်တို့ ခေါင်းထဲက ရှင်းထုတ်ကြပါ။
အထူသဖြင့် လူသားမျိုးနွယ်ကို နှစ်မျိုးခွဲ၊ အစိတ်စိတ် အမွှာမွှာ ခွဲပြီး မကောင်းဆိုးဝါးအလ္လာဟ် အတွက် မသတ်ခိုင်းပါနဲ့ ....၉နှစ်ကလေး ကို မုဒိန်းကျင့်တဲ့ မိုဟာမက်ကို လည်း မကိုးကွယ်ပါနဲ့ ။
House of Islam VS House of War
အဆိုးထဲ က အကောင်း က မြန်မာလူမျိုးတွေ က တစ်ကမ္ဘာလုံး က လူမျိုးပေါင်းစုံ၊
ဘာသာပေါင်းစုံ က လူတွေ အားလုံး လိုပဲ နိုးကြားလာကြပါပြီ
ပြင်သစ်၊ အင်္ဂလန်၊ အမေရိကန် တို့ က ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေ အားလုံးလည်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ နိုးကြားလာကြပါပြီ
ဗလီတွေ အလုံး ၅၀ လောက်ဆောက်ခွင့်ပြုတာ ဟာ လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်ကို အသိအမှတ်ပြုတာဖြစ်ပေမဲ့ အဲဒါကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး အင်္ဂလန်လို နိုင်ငံမျိုးမှာ ဗလီ အလုံးပေါင်း ၁၅၀၀ ကျော်ဆောက်တဲ့ အခါ ကျတော့ ဒါဟာ လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့် မဟုတ်တော့ ပဲ တစ်စုံတစ်ရာ ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာ အင်္ဂလိပ်တွေ သဘောပေါက်လာကြပါပြီ။
အခုတောင် ဥရောပမှာ ဗလီဆောက်ခွင့်တွေကို တစ်ချို့ နိုင်ငံတွေမှာ ပိတ်ပင်လိုက်ပါပြီ။
သြဇီအစိုးရကလည်း ရှရီးယား မွတ်ဆလင် ဥပဒေကို လုံးဝလက်မခံနိုင်ပါဘူး။
ခင်ဗျားတို့ မွတ်ဆလင်တွေ မကျေနပ်ရင် ခင်ဗျားတို့ ရဲ့ မွတ်ဆလင်နိုင်ငံတွေကို ပြန်သွားကြပါလို့ဗြောင်ပြောလိုက်ပါပြီ
ဂျပန်တွေ ဆိုလည်း ဗလီဆောက်တာ ၊ မွတ်ဆလင်ကို နိုင်ငံသားပေးတာတွေ လုံးဝ တင်းကြပ်ထားပါတယ်
အမေရိကန်တွေ ဆိုလည်း မွတ်ဆလင်တွေကို ဗီဇာ တင်းကြပ်ပြီး တိုင်းပြည်ထဲကို အခြေချနေထိုင်ဖို့ အလုံးအရင်းနဲ့ အ၀င်မခံတော့ပါဘူး။ သေချာတင်းကြပ်လာကြပါပြီ။
ကမ္ဘာကြီး ဟာ House of Islam VS House of Non-Muslims နှစ်မျိုးပဲ ခွဲထားပြီး ကျနော်တို့ မွတ်ဆလင်မဟုတ် တဲ့ လူသားမျိုးနွယ်တစ်ရပ်လုံးကို အလ္လာဟ်ရဲ့ ရန်သူတွေ လို့ကုရန်အာန်ကျမ်းမှာ အတိအလင်း ဖေါ်ပြထားပြီးတဲ့ အတွက်...
မွတ်ဆလင်တွေ ကို ထိရင် တစ်ကမ္ဘာလုံး ကမွတ်ဆလင်တွေ က ခံမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုသလိုပဲ
မွတ်ဆလင်မဟုတ်တဲ့ ဟိန္ဒူ ၊ခရစ်ယာန် ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဘာသာမဲ့ ၊ စတဲ့ လူသားတွေ ကို မွတ်ဆလင်တွေထိရင် လည်း တစ်ကမ္ဘာလုံး က လူသားမျိုးနွယ်တစ်ရပ်လုံး က လက်ပိုက်ကြည့်နေမှာ မဟုတ်ပါဘူး
ဒီအိုင်ဒီယာ ( မွတ်ဆလင်များသည် မြင့်မြတ်သည်၊ မွတ်ဆလင်မဟုတ်သူများသည် ဒိဌိ Kafir များဖြစ်သည်၊ ငါတို့ မွတ်ဆလင်များသည် ကမ္ဘာလုံးကို မွတ်ဆလင်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်၊ မကြာခင် တစ်ကမ္ဘာလုံး က လူသားတွေဟာ အလ္လာဟ်ကို ကိုးကွယ်ရမည့် အချိန်ကျရောက်တော့မယ်) ...ကို ခေါင်းထဲ သံမှိုစွဲသလို ရိုက်ထည့်ခံထားရတဲ့ မွတ်ဆလင်တွေဟာလည်း တစ်ကမ္ဘာလုံး က လူသားမျိုးနွယ်တစ်ရပ်လုံး ရဲ့ ဘုံရန်သူဖြစ်သွားပါပြီ။
လူသားမျိုးနွယ်..အားလုံးဟာ မွတ်ဆလင်တွေ ရဲ့ တူညီတဲ့ Demographic Islamization, Jihad Terrorism တွေ ကို နားလည်သဘောပေါက်လာပြီး ကမ္ဘာပေါ် က လူမျိုး အသီးသီး၊ ဘာသာအသီးသီး က ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေ ဟာ တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့တစ်ခုတည်းသော ဘုံရန်သူကို ရင်ဆိုင်ကြဖို့ လူသားမျိုးနွယ်တစ်ရပ်လုံး စည်းလုံးလာကြပါပြီ
မည်သည့် လူမျိုး မည်သည့် ဘာသာ မဆို မွတ်ဆလင်တွေရဲ့ စောက်ကျင့် စောက်ကြံတွေကို ပြောတဲ့ အခါ မွတ်ဆလင်တွေရဲ့ ဗျူဟာ Strategy, Scenario တွေဟာ ကုရန်အာန်ကျမ်းက ချမှတ်ပေးတဲ့ အတိုင်း တစ်ပုံစံတည်းပါပဲ။ အင်အား မကောင်းရင် Taqiyya ( Deceit) အင်အားကောင်းလာတာနဲ့ Jihad.
လူကို လူလို့ မကြည့်ခိုင်းပဲ.... လူသားမျိုးနွယ် ကို မွတ်ဆလင်နဲ့ မွတ်ဆလင်မဟုတ်တဲ့ သူဆိုပြီး လူကို နှစ်အုပ်စုခွဲပြီး မသေမချင်း သတ်ခိုင်းမှတော့ ...ဒီအတိုင်းလည်း လူ့ သမိုင်းတလျှောက် သတ်နေမှတော့ ဒီကမ္ဘာကြီးမှာ ဘယ်လို ငြိမ်းချမ်းတော့မှာလဲ
ဒီတော့ မည်သည့်ဘာသာ ၊ မည်သည့်လူမျိုးကို မဆို မွတ်ဆလင်တွေ စော်ကားသတ်ဖြတ်တာဟာ
တစ်ကမ္ဘာလုံး က လူသားမျိုးနွယ်တစ်ရပ်လုံးကို စိန်ခေါ်တာပါပဲ
ရခိုင်ပြည်မှာ ရခိုင်လူမျိုး ၁၀ယောက်ကို မွတ်ဆလင်တွေ လည်လှီးသတ်တာဟာ
မြန်မာလူမျိုး ၁၀ ယောက်ကို မွတ်ဆလင်တွေ လည်လှီးသတ်တာပါပဲ
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ဝင် ၁၀ ယောက်ကို မွတ်ဆလင်တွေ လည်လှီးသတ်တာပါပဲ
မြန်မာ့တပ်မတော်သား ၁၀ ယောက်ကို မွတ်ဆလင်တွေ လည်လှီးသတ်တာပါပဲ
ရခိုင် ကို သတ်တာ ဟာ မြန်မာကို သတ်တာပါပဲ
ရခိုင် ကို စိန်ခေါ်တာ ဟာ မြန်မာတစ်မျိုးသားလုံးကို Jihad မွတ်ဆလင်တွေ စိန်ခေါ်လိုက်တာပါပဲ
မြန်မာတွေက Racists လား။
မွတ်ဆလင်တွေဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အဆိုးဆုံး Racists တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ မျက်စိထဲမှာ လူကို လူလို့ မမြင်တတ်တော့ပါဘူး။
ဒီကောင် ကက်ရ်ဖာ Kafir ( Non_Muslim မွတ်ဆလင်မဟုတ်တဲ့သူ) ဆိုပြီး ကမ္ဘာပေါ်က လူမျိုးနွယ် ကို မွတ်စလင်နဲ့ မွတ်ဆလင်မဟုတ်တဲ့သူ Kafir ဆိုပြီး နှစ်မျိုးခွဲပြီး မသေမချင်း သတ်ခိုင်းတယ်။
ဘယ်လောက် ပက်စက်လိုက်တဲ့ မကောင်းဆိုးဝါးအလ္လာဟ် နဲ့ သူ့ တမန်တော်မိုဟာမက်ဆိုတဲ့ ( ၉နှစ်ကလေးကို မုဒိန်းကျင့်တဲ့) အယုတ်တမာကောင်လဲဆိုတာ
ကျနော်တို့ ခင်ဗျားတို့ ဟိန္ဒူ ၊ခရစ်ယာန် ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ အားလုံးဟာ Kafir တဲ့။ ဒီလိုခေါ်ခံရတာဟာ နီဂရိုး၊ ကုလားအခေါ်အဝေါ်လို Racist ဖြစ်ပါတယ်။ ဒိဌိလိုမျိုးခေါ်တာပါ။
မွတ်ဆလင်တွေကို ခေါ်တောကုလားတွေလို့ အခေါ်မခံချင်ရင် မွတ်ဆလင်ကုရ်အာန်ကျမ်းစာအုပ်ထဲက မွတ်ဆလင်မဟုတ်တဲ့လူသားအားလုံးကို Kafir ဒိဌိ လို့ ခေါ်တာ ချက်ချင်းရပ်လိုက်ပါ။
ကျနော်တို့ အားလုံးဟာ အစ္စလမ်ကို မကိုးကွယ်တာနဲ့ဘာမှ Kafir ဒိဌိ လို့ ခေါ်စရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး။
မွတ်ဆလင်တွေဟာ အင်မတန် လူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့ Racist တွေပါ ။
ရိုဟင်ဂျာ-ဘင်္ဂါလီမွတ်ဆလင် ထိတာနဲ့ ပြည်တွင်းက မွတ်ဆလင်တွေ၊ ဥရောပက မွတ်ဆလင်တွေ က ဘာမှတော်စပ်မှုမရှိပဲ ၀ိုင်းအာပါတယ်။ အင်မတန် လူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့ Racist တွေပါ ။
အမေရိကန်က ဘင်လာဒင်နဲ့ အယ်ကိုင်းဒါးကို ဗျင်းလို့ မြန်မာပြည်တွင်းက မွတ်ဆလင်တွေ က ခံစားနေရတယ်။ အင်မတန် လူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့ Racist တွေပါ ။
တစ်ကမ္ဘာလုံးက မွတ်ဆလင်နဲ့ မြန်မာပြည်က မွတ်ဆလင်တွေနဲ့ က အနည်းငယ် 10-15% variation ရှိချင်ရှိမယ်။
ဒါပေမယ့် မွတ်ဆလင်အားလုံး က ၈၀% စောက်ကျင့်အတူတူပဲ။
ဘာလို့ လဲဆိုတော့ ကုရန်အာန်တစ်အုပ်ထဲ က တူညီတဲ့ သဘောတရားတွေကို ( ငါတို့ သည်မွတ်ဆလင်များဖြစ်သည်၊ မွတ်ဆလင်အားလုံးသည် အခြားသောဘာသာအားလုံးထက် မြင့်မြတ်ပြီးသောလူများဖြစ်သည်၊ တခြားဘာသာ လူအားလုံးသည် အလ္လာဟ်ဧ။် ရန်သူများဖြစ်ကြသည်) ခေါင်းထဲ ရိုက်ထည့်ခံထားရတဲ့လူတွေဖြစ်လို့ ပါပဲ။
လူကို လူလို့ အရင်မြင်အောင်ကြည့်ဆိုတာ မွတ်ဆလင်တွေကို အရင်ပြောရမှာ...
မိုဟာမက် ဘာရောဂါနဲ့ သေတာလဲ
I think Mohammed died of AIDS.
Muhammad had so many vaginal & anal intercourse with so many women
Additionally, Muhammad licked 11 pussies every night, so..... you know....
...worms, viruses , bacteria from multiple anuses/vaginas caused AIDS to Muhamad :)
ကျနော်ပြောတာ မဟုတ်ပါ။ မိုဟာမက်က ကုရန်အာန်ကျမ်းမှာ သေချာရေးထားပြီးသားပါ ။
မွတ်စလင်တွေအင်အားမကောင်းသေးခင်မှာ ဘယ်လိုချိုနေရမယ်၊ ဘယ်လို လိမ်ညာရမယ် ( Deceits) ဆိုတာ အတိအကျပါပြီးသားပါ။ Taqiyya ( လိမ်လည်လှည့်ဖျားနည်း)လို့ ခေါ်ပါတယ်
Taqiyya (alternate spellings taqiya, taqiyah, tuqyah), meaning religious dissimulation, This meansalegal dispensation wherebyabelieving individual can deny his faith or commit otherwise illegal or blasphemous acts while they are under those risks.
This practice emphasized in Shi'a Islam whereby adherents may conceal their religion when they are under threat, persecution, or compulsion.Taqiyya was developed to protect Shi'ites who were usually in minority and under pressure. In the Shi'a view, taqiyya is lawful in situations where there is overwhelming danger of loss of life or property and where no danger to religion would occur thereby.
The majority Sunni Muslims rarely found it necessary to hide their beliefs. However, there are examples of practicing Taqiyya among Sunnis where it was necessary. In the Sunni view, denying your faith under duress is "only at most permitted and not under all circumstances obligatory".
The Prophet Muhammad said, ” War is deceit.”
SAHIA AL- BUKHARI
Vol 4, BK52, Hadith 269
Which means Every Muslims can lie ( pretending, cheating as they were so peaceful and cool
people ) in order to hide their actual purpose ie; Islamization.
Lying for the sake of Islam is encouraged ( Qur'an 3:28 and 16:106)
Systematic lying to the Non-Muslims, must be considered part and parcel of Islamic tactics.
အစ္စလမ်ရဲ့ အကျိုးအတွက် ရှေးရှုပြီး မွတ်ဆလင်မဟုတ်သူတွေကို လိုအပ်သလို ဗြောင်လိမ်ပါတဲ့။
မီးရှို့တဲ့ မွတ်ဆလင်ကောင်တွေ က ရှို့နေတာ က တစ်ပိုင်း
နိုင်ငံတကာမှာ Image ကောင်းအောင် မီဒီယာမှာ ၀ါဒဖြန့် တဲ့ မွတ်ဆလင်က ဖြန့် နေတာ က တစ်ပိုင်း
ဒေါ်စု ကို ချုပ်နေတဲ့ မွတ်ဆလင် က ချုပ်နေတာ က တစ်ပိုင်း
ဘာနဲ့ သွားတူနေသလဲဆိုရင် မွတ်ဆလင်တွေဟာ စစ်မြေပြင်မှာ ကိုယ်ကျရာတာဝန်ကို ကျရာနေရာ က နေ
ဟုတ်ဟုတ် မဟုတ်ဟုတ် မွတ်ဆလင်အရေး အတွက် ရှေ့မျက်နှာ နောက်ထားပြီး ဗြောင်လိမ်နေတာ တွေ့ ရတယ်။
မွတ်ဆလင်တွေ ဟာစစ်ဖြစ်နေသလို ၊ စစ်တိုက်နေသလို သဘာနဲ့ ကျရာနေရာမှာ အစွမ်းကုန်လုပ်နေကြတာ ကြောက်ဖို့ သိပ်ကောင်းပါတယ်။
ဒီလို စုစုစည်းစည်းနဲ့ အပတ်တိုင်းသောကြာနေ့ တိုင်း ဗလီမှာ ကိုယ့်မွတ်ဆလင် အချင်းချင်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးနေကြတဲ့၊ လမ်းစဉ်တွေချပေးနေတဲ့ မွတ်ဆလင်တွေကို
တစ်နှစ်ကို တစ်ခါတောင် စုစုစည်းစည်း မနေတတ်တဲ့ ၊ တွေ့ တာနဲ့ ကိုယ့်အချင်းချင်း စောင်းမြောင်းမနာလိုဖြစ်၊ စောက်မြင်တွေ ကတ်၊ စောက်တင်းချ၊ စကားလုံးတွေနဲ့ ကျော....ပေါက်ကရတွေ ချည်းထိုင်လုပ်နေကြတဲ့ ကျနော်တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေ နဲ့ ဘယ်လို ရင်ဆိုင်ကြမလဲ
ဒီကြားထဲ၊ မြန်မာတွေ ကွဲအောင်၊ အချင်းချင်း သတ်အောင် လှုံ့ဆော်ဘေးတီးပေးနေတဲ့ မိုးသီးဇွန်၊ လွဏ်းဆွေ၊ နေဇော်နိုင်၊ အောင်ဇော်၊ ဇာနည်၊ ဟန်ယောင်ဝေ၊ တို့ လို စောက်ရူးကောင်တွေက အပုံကြီး
မြန်မာ စစ်စစ်တိုင်း မြန်မာအားလုံး စည်းလုံးမှုကို ရှေးရှုသည်။
မြန်မာတွေ အချင်းချင် သတ်ချင်လာ တိုင်း ဘင်္ဂလီမွတ်ဆလင် သန်း ၁၆၀နဲ့ ပြည်တွင်း မွတ်ဆလင် ၄သန်း အကြောင်း အရင် စဉ်းစားပါ။
ရန်သူသာလျှင် မြန်မာတွေ အချင်းချင်း သတ်နေ အောင် လှုံ့ဆော်သည်။
မည်သည့် နိုင်ငံရေး မှ Demographic Islamization လောက်အရေးမကြီးပါ။
ရခိုင် လူမျိုး လူဦးရေတိုးပွားအောင် အစွန်းကုန် ကလေးမွေးပေးကြပါ။
မွတ်ဆလင်တွေနဲ့ Strategy ဗျူဟာတွေ၊ စောက်ကျင့်စောက်ကြံတွေ အားလုံးကို ရခိုင်သွေးချင်းတွေနားလည်ကြပါတယ်
ဒီကောင်တွေ ဘာလုပ်ဖို့ ကြံနေတာလဲဆိုတာလည်း ရခိုင်သွေးချင်းတွေ သိကြပါတယ်။ ဒီတော့
ရခိုင်လူမျိုးဇနီးမောင်နှံတွေ တစ်အိမ်ထောင်ကို ကလေး ၇ယောက် ၁၀ယောက်လောက် ရသလောက်မွေးကြပါ။ အမျိုးကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါ။
အရေအတွက်၊ အရည်အချင်း ဘယ်လိုပဲပြောပြော ၊ မွတ်ဆလင် အရေအတွက်တွေ များလာရင်၊ ဘယ်လို အရည်အချင်းရှိတဲ့ လူမျိုးမှ ခံနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။
သူမွေးကိုယ်မွေးပဲ ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူဦးရေ အရမ်းများလာလည်း မတတ်နိုင်ဘူး။
ကိုယ်မမွေးရင် ကိုယ်မျိုးပျောက်သွားမှာ ပဲ။ မွတ်ဆလင်တွေ က စက်သေနတ်ပစ်သလို မွေးနေတာ
ရိုဟင်ဂျာ ဘင်္ဂါလီမွတ်ဆလင်တွေ ရဲ့ ကလေးမွေးနှုန်းဟာ ၅စက်ကန့် ကို တစ်ယောက်နှုန်းမွေးတယ်။
ကဲ ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်တွေ နဲ့ ဒီလို မွတ်ဆလင်တွေ မွေးနေတယ်။
တဘက်မှာ ချိန်ကိုက် ဘယ်လို တိုင်းရင်းသားဖြစ်အောင် အောက်တန်းစားနည်းလမ်းတွေ သုံးနေတယ် သိတယ်ဟုတ်။
ရခိုင်လူဦးရေ ကို ၃.၅သန်း ကနေ နှစ်ဆခွဲလောက် အထိ အချိန်တို အတွင်း နောင်နှစ် ၃၀ လောက်အတွင်းဖြစ်နိုင်သမျှ အစွန်းကုန် ရခိုင်သွေးချင်းလူဦးရေတိုးပွားအောင်ဆောင်ရွက်ကြပါ။
မွတ်ဆလင်များ အစွန်းရောက်ခြင်း ၊ အစွန်းမရောက်ခြင်းသည် မွတ်ဆလင်လူဦးရေအချိုးအစားနှင်တိုက်ရိုက်အချိုးကျပါသည်
မွတ်ဆလင်လူအင်အားမကောင်းသေးသော ၊ မွတ်စလင်လူဦးရေ ၅၀% မစွန်းသေးသော နိုင်ငံ၊ မြို့၊ ဒေသများမှ မွတ်စလင်များမှာ ( မွတ်စလင်လူဦးရေ ၅၀% မစွန်းသေးသောကြောင့်) ၊ အချိန်မတန်သေးသောကြောင့် အစွန်းမရောက်သေးပါ
နိုင်ငံ၊ မြို့၊ ဒေသများတွင်း မွတ်ဆလင်လူအင်အားများလာသော၊ မွတ်စလင်လူဦးရေ ၅၀% စွန်းသွားသော ကျော်သွားသော နိုင်ငံ၊ မြို့၊ ဒေသများမှာ မူ အစွန်းရောက်ဖို့ အချိန်တန်ပြီဖြစ်သဖြင့် ဘူးသီးတောင် မွတ်စလင် ၉၅%
မောင်တော ၉၅%၊ သံတွဲ မွတ်စလင် ၆၀% စစ်တွေ မွတ်စလင် ၅၀% ဖြစ်သွားသောကြောင့် အစွန်းရောက်သွားကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အကယ်စစ်စစ် အစွန်းရောက် မွတ်စလင်ဆိုသည်မှာ မွတ်စလင်လူဦးရေ ၅၀%စွန်းသွားသောကြောင့် အစွန်းရောက်ဖို့ အချိန်တန်သွားသောကြောင့် အစွန်းရောက်မွတ်စလင်ဖြစ်သွားခြင်းဖြစ်ကာ
အစွန်းမရောက်မွတ်စလင်ဆိုသည်မှာ မူ မွတ်ဆလင်လူဦးရေ အစွန်းမရောက်သေးသောကြောင့် ၊ မွတ်ဆလင်လူဦးရေ အလယ်အလတ်ပဲရှိသေးသောကြောင့် အစွန်းရောက်ဖို့ အချိန်မတန်သေးသောကြောင့်
ယခု ရန်ကုန်၊ မန်းလေးမွတ်ဆလင်များကို ကြည့်ပါ။
ရန်ကုန်၊ မန်းလေး မှ မွတ်ဆလင်များသည် ထိုင်းတောင်ပိုင်း၊ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တော မှ မွတ်ဆလင်များကဲ့သို့ အစွန်းရောက်မွတ်ဆလင်များ မဟုတ်ပဲ လူများစု ဗုဒ္ဓဘာသာများနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေသော ငြိမ်းချမ်းသောမွတ်ဆလင်များ ဖြစ်နေသည်ကို သင်တွေ့ နိုင်ပါသည်။
မွတ်ဆလင်လူဦးရေ ၅၀% မစွန်းသေးသောကြောင့် အချိန်မကျသေးသောကြောင့် အစွန်းမရောက်ကျသေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ထိုင်းတောင်ပိုင်း၊ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တော မှ မွတ်ဆလင်များမှာ မူ မွတ်ဆလင်လူဦးရေ ၅၀% စွန်းသွားသော ကြောင့် အချိန်ကျပြီ ဖြစ်သောကြောင့် အစွန်းရောက်သွားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
သရက်သီးနဲ့ ဥပမာ ပေးပါမည်
သရက်သီး စိမ်းမျိုး၊ သရက်သီးမှည့် မျိုးဟူကာ နှစ်မျိုးမရှိပါ။ သရက်သီးတစ်မျိုးသာရှိပါသည်။
အချိန်မတန်သေးသော၊ စောသေးသော သရက်သီးက စိမ်းကာ၊ အချိန်တန်သော သရက်သီးက မှည့်သွားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အမြဲတမ်းစိမ်းနေတဲ့ သရက်သီးမျိုး.......အမြဲတမ်းမှည့်နေတဲ့ သရက်သီးမျိုး...ဆိုတာ ရှိကိုမရှိဘူး
အခြေအနေ ကာလံဒေသကို ကြည့်ပြီး သရက်သီးက မှည့်သွားသလို
အခြေအနေ ကာလံဒေသကို ကြည့်ပြီး သရက်သီးက မမှည့်သေးတာပဲ ရှိတယ်
အဲဒါကို အမြဲတမ်းစိမ်းနေတဲ့ သရက်သီးမျိုး.......အမြဲတမ်းမှည့်နေတဲ့ သရက်သီးမျိုး..လို့ လာမပြောနဲ့ 
ထို့ အတူ မွတ်ဆလင် က မွတ်ဆလင်ပဲ
အစွန်းရောက် မွတ်ဆလင်နဲ့ အစွန်းမရောက်သေးတဲ့ အလယ်အလတ် မွတ်ဆလင် ဆိုတာ အခြေအနေ ကာလံဒေသ၊မွတ်ဆလင်လူအင်အားကို ကြည့်ပြီး ပြောင်းလဲနေတာ..
Taqiya ( Islamic Deceit) ပဲ
ယခု တာမွေ မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဘယ်သူများနေရဲပါသလဲ၊ ဟုတ်ကဲ့၊ မနေရဲတော့ပါဘူး။
ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာဘယ်သူများနေရဲပါသလဲ....မှည့်နေပြီလေ၊
ဒါကြောင့် မမှည့်လာခင်မှာ အစိုးရအနေနဲ့ သေချာ ကိုင်ကွယ်ပေးပါ။
ရခိုင်သွေးချင်းတွေ ကိုအဆုံးစွန် ကာကွယ်ပေးပါ။
ဒီမြန်မာဘက်က မွတ်ဆလင်တွေကို လည်း အစွန်းရောက်ချိန်တန်သည် အထိစောင့်နေအုန်းမည်ဆိုပါက................
Islamization in England
ဥရောပတိုက်မှာ ဗလီပေါင်း ၆၀၀၀ ကျော်ကို ဆော်ဒီအာရဗ်တွေ ကိ ပိုက်ဆံ အကုန်ခံပြီးမှိုလိုဆောက်ထားပါတယ်
အင်္ဂလန်နိုင်ငံတစ်ခုတည်းမှာ ဗလီပေါင်း ၁၅၀၀ ကျော်ရှိပါတယ်
1889 ခုနှစ်မတိုင်မီအထိ အင်္ဂလန်မှာ ဗလီတစ်ခုမှ မရှိခဲ့ပါဘူး။
အခု နှစ်ပေါင်းတစ်ရာကျော်လေး အတွင်းမှာ ဗလီ၁၅၀၀ ကျော်ဆိုရင်နောင် နှစ်တစ်ရာဆိုရင် ဗလီ ၃၀၀၀ လောက်ရှိတော့မယ်
အင်္ဂလန်မှာ ဗလီပေါင်း ၃၀၀၀ ဆိုရင်တော့ အင်္ဂလန်ဟာ Successfully Islamized ဖြစ်သွားပါပြီ။
အခု အင်္ဂလိပ်တွေ၊ နိုင်ငံများစွာကို သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့ စည်းစနစ်ကျတဲ့ လူမျိုးတွေ၊
အရင်မျိုးချစ် အင်္ဂလိပ်တွေ ခေတ် က သူတို့ သားသမီးမျိုးဆက်တွေကို ဗလီတစ်ခုမှ မရှိတဲ့ အေးချမ်းတဲ့ အင်္ဂလန်ကို ထားခဲ့တယ်
အခု အင်္ဂလိပ်ကလေးလေးတွေဆိုရင် မွတ်ဆလင်လေးတွေကြားထဲမှာ.....အင်္ဂလိပ်အဖြူမတွေကို မုဒိန်းကျင့်၊ ဆွဲစိ....
အခု အင်္ဂလိပ် ဂေါက်မျိုးဆက် က နောင်အင်္ဂလိပ်သားမြေး မျိုးဆက် ကို ဗလီ ၂၀၀၀ ကျော်နဲ့ မွတ်ဆလင် ဂျီဟတ် သန်းပေါင်းများစွာနဲ့ အင်္ဂလန်မြေကြီးကို ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ နောင် အင်္ဂလိပ်မျိုးဆက် စုတ်ပြတ်သတ်အောင် ခံကြရမှာပဲ။
မိုဟာမက်ကို အစွန်းရောက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့ မွတ်ဆလင်တွေ Greatest personality cult ပါပဲ
မွတ်ဆလင်တွေ ဟာ မိုဟာမက်ကို ဘုရားလို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုးကွယ်ခဲ့သလဲ cult of personality ဆိုရင် မိုဟာမက်က မွတ်ဆလင်တွေကို ကုလားအုပ်သေးကို သောက်ခိုင်းတာကို မွတ်ဆလင်တွေက သောက်သတဲ့
တစ်ချို့ Hadith မှာရေးထားတာ ဆိုရင် မွတ်ဆလင်တွေ ဟာ မိုဟာမက် ပေါက်တဲ့ ကျင်ငယ်ရေကို တောင်
တကယ့်ကို ပဲ မွတ်ဆလင်တွေ ဟာ မိုဟာမက်ကို အစွန်းရောက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုးကွယ်ခဲ့တာပဲ
Greatest personality cult ပါပဲ
ဘယ်လောက်တောင်မှ ဦးနှောက်ထဲကို လူသာမန်စိတ်ပျောက်သွားအောင် ရိုက်ထည့်ခံထားရသလဲ မွတ်ဆလင်တွေ သူတို့ ကိုယ်ကို မသိကြဘူး။
ကျနော်တို့ မြတ်စွာဘုရားက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကို သေးသောက်ခိုင်းဘူးလား။
ခရစ်တော် က ရော ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်တွေကို သေးသောက်ခိုင်းဘူးလား။
တကယ်ပါဗျာ။ မွတ်ဆလင်တွေဟာ သာမန် မဟုတ်သလို ၊ ဆိုက်ဒ်ကို ကောင်တွေ၊
ဘယ်လို ကောင်တွေမှန်းကို နားမလည်တော့ဘူး။
ဒါကြောင့်လည်း လူစိတ်မရှိတော့ပဲ လူကို လူလို့ မတွေးတော့ပဲ ၊ မမြင်တော့ပဲ အလ္လာဟ်ကို မကိုးကွယ်တဲ့ အလ္လာဟ်ရဲ့ ရန်သူတွေပဲဆိုပြီး အသေခံဗုံးခွဲသတ်တာပဲ။
We will defeat Islam......
100% Islam World !! Would there be peace on Earth?...
မိုဟာမက်ကို အစွန်းရောက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့ မ...
By Gods, We will defeat Islam......